Madaxweyne Farmaajo oo amray in la baaro shaqaaqadii ciidanka - BBC News Somali
Madaxweyne Farmaajo oo amray in la baaro shaqaaqadii ciidanka
Madaxweyne Farmaajo markii la doortey kadib wuxuu xoogga saaray amniga
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa amray in baaritaan lagu sameeyo sababta keentey isku-dhicii shalay dhexmaray ciidamo dowladda ka wada tirsan, sida BBCda ay u xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan Villa Soomaaliya.
Is rasaasayn shalay dhexmartay ciidamada illaalada madaxtooyada iyo kuwa Xasilinta Caasimadda ayaa waxaa ku dhintey 5 askari oo midkood uu ahaa taliye ku xigeenka ciidamada nabad suggida gobolka Banaadir Ciise Jiijiile.
Dhacdadan ayaa waxaa lagu falanqeeyey shirkii Guddiga Amniga Qaranka oo uu shir guddoomiyey madaxweyne Farmaajo, waxaana la saaray guddi xaqiiqo raadin ah oo uu guddoomiye ka yahay taliyaha booliiska Jeneraal Janeraal C/xakiin Daahir Siciid (Saacid), xubnanana ka yihiin wasiirka amniga, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyeyaasha nabad suggida iyo xoogga dalka.
Qodobka ugu muhiimsan ee baaritaanka laga bilaabayo ayaa ah in dib loo daawado muuqaaladii ay duubtay kaamirada qarsoon ama CCTV ee ku xiran halka ay dhacdada ugu daran ka dhacday ee ah Tiyaatarka agtiisa si loo ogaado labada dhinac kan rasaasta bilaabay.
Taliyayaasha Ciidamada Soomaaliya oo soo saaray amaro ku saabsan ammaanka dalka
Maxaa keena isku dhacyada ?
Ma ahan wax cusub isku dhacyada ciidamada dowladda ka wada tirsan, waa arrin muddo sanooyin ah soo socotey, mana jirto wax baaritaan dowladeed iyo mid madax banaan toona oo inta laga sameeyey natiijo laga soo saaray sababta keentey iyo cid loo ciqaabay toona wixii hadda ka horeeyey.
Jeneraal Maxamed Ibraahim Guubir oo ah falanqeeye arrimaha amniga oo ay BBCda la hadashay ayaa yiri "Qibrad darada ayay noqon kartaa arrintaasi, labada sargaal in ay murmaan ma ahayn, waxa ay ahayd in saraakiishii ka saraysay loo sheego, amaradii la siiyayna ay fuliyaan".
Wali waxaa socda qorshaha dhismaha ciidamada Soomaaliya, waxaana qeyb ka ah tababar dhinac kasta ah oo ciidamada kala duwan la siinayo, gaar ahaan sidii ay u dhaqmi lahaayeen marka ay hawlgalada ku jiraan haddii ay ahaan lahayd dhexdooda ama shacabkaba.
Ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya oo isku laayay Muqdisho
Waxaa arrintaasi xoojinaya in ay wax weyn ka tarayso in aysan dhacdooyinkani soo laabanin Jeneraal Maxamed Guubir oo yiri "waxaa looga gaashaan karaa in dambiga ninkii lahaa xukun lagu fuliyo, tababarna ciidamada loo furo"
Ciidamada Xasilinta Caasimadda
Islamarkii ay xukunka dalka la wareegeen madaxdii cusbeyd sanadkani horaantiisii, waxaa durba la sameeyey ciidamo isku dhaf oo laga soo kala xuley booliiska, nabad suggida iyo xoogga dalka.
Waxaa saldhig looga dhigey xaruntii hore ee Xisbiga Kacaanka oo ku dhegan Garoonka Ciyaaraha Muqdisho.
Ciidamadani waxa ay leeyihiin darees gaar ah iyo talis gaar ah, waxaana loo xilsaaray in ay Muqdisho kusoo dabaalaan amni la'isku haleyn karo.
Dowladda waxa ay magaalada gabi ahaanba ka saartay inta baddan ciidamadii kale, gaar ahaan xoogga dalka kuwaasi oo la dajiyey xeryo magaalada banaankeeda ah, waxaana la mabnuucay in gaari ciidan oo aan hawlgal ku jirin uu dhex socdo magaalada. Hase yeeshee waxaa wali magaalada ku sugan ciidamada booliiska iyo kuwa illaalada madaxtooyada.
Ciidamada Xasilinta Caasimadda waxaa lagu ammaanay in ay wax ka qabteen amniga Muqdisho, waxaana xusid muddan in ay aad isu dhimeen qaraxyadii iyo falalkii kale ee amni darada ahaa ee Muqdisho ka dhici jirey, hase yeeshee waxaa muuqata in wali hawl badan ay u taalo.
Dowladda Soomaaliya: Covid-19 ayaa mar saddexaad dalka ka dillaacay